Maduze nje imigwaqo ye-bio-bitumen esekelwe ku-micro-algae? - Afrikhepri Foundation
Ngokushesha imigwaqo e-bio-bitumen isekelwe kuma-micro-algae?
DIsivele isetshenziselwe ukukhiqiza i-biofuel, ipulasitiki noma izimonyo, i-microalgae yethulwe njengenye indlela engathí sina ku-petroleum. Kulombono, ama-microalgae asetshenziswa okokuqala ukwenza ithamu.
Le biobitum yadalwa njengengxenye ye Uhlelo lwe-Algoroute, eholwa ngabaphenyi base-University of Nantes kanye neFrench Institute for Transport, Planning and Network Sciences and Technologies (Ifsttar). Ukufeza lokhu, baxuba ulwelwe namanzi acindezelwe, baze bathola uketshezi olumnyama nolubukhali eduze ne-petroleum ejwayelekile. Futhi ukufana akukhawulelwanga ekubukekeni kwayo, ngoba i-biobitume inezici ezifanayo nezikawoyela: “Liquid above 100 ° C, it allows to coat mineral aggregates aggregate viscoelastic from -20 ° C to 60 ° C , iqinisekisa ukuhlangana kwesakhiwo esiyimbudumbudu, isekela imithwalo futhi ivuselele izingcindezi zemishini ”.
Izivivinyo kumele zenzeke ukuze zihlolwe ukuziphatha kwalesi biobitum ngokuhamba kwesikhathi, futhi inzuzo yenqubo ngaphambi kokuyibona, mhlawumbe, ihlanganisa imigwaqo yethu. Ama-Microalgae kudala aziwa ngezicelo zawo njengama-coloring agents kuzimonyo noma njengezithako zokudla. Ukuwacwengisisa ukuze akhiqize, ngokwesibonelo, ama-biofuels, umqondo osuvele eminyakeni eyedlule. Namuhla, ama-microalgae aphakathi kwezinye izindlela ezethembisayo kune-petroleum. Ngokuthuthukiswa kwezinqubo ezisebenza kahle futhi ezinenzuzo, imikhiqizo eminingi evela embonini yokucwenga izotholakala.
Njengengxenye yohlelo lwe-Algoroute, oluxhaswe yisifunda se-Pays de la Loire, abacwaningi abavela emalabhorethri aseNantes nase-Orleans bakhiqize i-bio-bitumen ngokuthuthukisa izinsalela ze-micro-algae, okuholele ngokwesibonelo ekukhipheni amaprotheni ancibilika emanzini avela ku-algae embonini yezimonyo. Basebenzise inqubo yokuqothula amanzi, amanzi acindezelwe kalula (esimweni esibucayi): Lokhu kuguqula le mfucumfucu ye-algae ibe yisigaba se-hydrophobic black viscous phase (bio-bitumen) ene ukubukeka okufana nokwe-petroleum bitumen (bheka isithombe). Le nqubo yenziwa ngokuguqulwa kwamanje kwe-55%.Ngenkathi ukwakheka kwamakhemikhali kwe-bio-bitumen kuhluke ngokuphelele kulokho kwebitume kusuka kuphethiloli, kunokufana: umbala omnyama nezakhiwo ze-rheological. Okuwuketshezi okungaphezu kuka-100 ° C, i-bio-bitumen yenza kube lula ukugqoka ama-viscoelastic amaminerali kusuka ku -20 ° C kuye ku-60 ° C, kuqinisekisa ukuhlangana kwesakhiwo esiyimbudumbudu, kusekela imithwalo futhi kuphumule izingcindezi zemishini. Ukumelana nokuhlaziywa kwesikhathi kuye kwaqala, kanye nezifundo zokuhlola inzuzo yenqubo ngenhloso yokukhiqiza okukhulu.Lokhu okusha kuletha inketho entsha engaba khona embonini yezemigwaqo, okwamanje encike ngokuphelele ku-oyela. Kuze kube manje, ama-bio-bitumens asethuthukile oyili abadidiyelwe bemvelaphi yezolimo (ngobubi bokuncintisana nokudla kwabantu) noma kusuka embonini yamaphepha, exutshwe nezinhlaka ukwenza ngcono izakhiwo zabo ze-viscoelastic. Kusetshenziswa i-microalgae, ukutshalwa kwayo okungadingi ukuhlanganiswa komhlaba olimekayo, ngakho-ke kunikeza isisombululo esikhangayo.
Bona okuningi ku: http://www.culturesciences.fr/2015/04/10/algoroute-du-bitume-microalgues#sthash.Hu5AoqKY.dpuf
isigaba INDAWO ESIPHILA KUYO
Ukuqalisa umzila we-4
Ukuzisiza - uLucien Auger (Audio)
I-GIMS: KuRekhodi - Idokhumentari (2020)
Inventors kanye nabafundi abamnyama